Amadeus: yakabatana zvakanyanya nekushanya | Ehupfumi Zvemari
Zvichida imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekudyara inosimbiswa kuburikidza nezvikamu zvine kukura kwakanyanya mune zvehupfumi munyika medu. Uye neiyi pfungwa, hapana mubvunzo kuti chimwe chezvakanyanya kukosha, pamwe chakanyanya kukosha, ndicho Turismo. Iyo Amadeus yakabatana zvakanyanya. Inogona kunge iri imwe yesarudzo dzakanakisisa dzekupera kwegore rino uye nechinangwa chekugadzirisa mashandiro atinoita mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Izvo hazvigone kukanganikwa, kune rimwe divi, kuti Amadeus ndeimwe yeiyo Spanish equities iyo ine yakanakisa hunyanzvi chimiro parizvino. Mudiki maererano nepfupi nepakati nepakati, pairi pachinzvimbo chekusarudza iyo kutenga zvikamu zvako kuita kuti mari ichengetwe kubva nhasi. Nekuti mukuita, ndeimwe yehunhu hunogona kuita zvakanakisa mumwedzi iri kuuya. Kunyanya kana iko kuitika mumisika yemari kuri kuwedzera kubva ikozvino.
Hazvigone kukanganwika kuti musika wekushanya mune zvese unoramba wakasimba kunyangwe kumwe kudzikira kwakaitika mumwedzi mitanhatu yadarika. Asi kunyangwe nezvose, inochengetedza margins ayo achiri kunakidza. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutariswa kuti hunhu hwenzvimbo yekushanya mumabhizinesi eSpanish haana kuwanda. Uye imwe yadzo iri chaizvo Amadeus, iyo inosanganisirwawo mune yakasarudzika indekisi yemusika wemusika wenyika, iyo Ibex 35. Chinhu icho, mune chero mamiriro ezvinhu, chichafanirwa kuongororwa kuti chigadzire chinotevera portfolio yekuchengetedzwa kwemakore mashoma anotevera.
1 Tourism inokura 5%
2 Amadeus: ine yakakwira kumusoro mikana
3 Mari yavo yakawedzera 5%
4 Nani hupfumi margins
5 Inowedzera mitsara mumutengo wayo
6 Iyo yakanyorwa pamatanho e64 euros
Tourism inokura 5%
Vashanyi vekunze vakashanyira Spain mwedzi wapfuura vakawedzera ne5% kuwedzera 7,6 miriyoni kusvika 73,9 mamirioni vakatishanyira mumwedzi gumi yekutanga. Kufanana nekushandisa kwako, yakawedzerawo zvakanyanya. Chero zvazvingaitika, chokwadi chakakosha ndechekuti maitiro akatanga mukota yechipiri aputswa nekuti akaisimbisa mana chegumi pazasi pevasvika, kunyangwe ichiwedzera 10% kupfuura mumwedzi mumwe chetewo wa4,6.
Mupfungwa iyi, anopfuura mamirioni e8.148 ndiyo mari yakanyorwa yakashanyirwa nevashanyi mwedzi wapfuura, maererano nedata rakaburitswa nhasi neSurvey yeVashanyi Ekushandisa (Egatur) yeNational Institute of Statistics. Chero zvazvingaitika, uku kuwedzera uko kunoisa mari yepakati pamushanyi pa1.067 euros, uye inomiririra a 0,4% kuderera kwegore. Chero zvazvingaitika, zvinomiririra chimwe chezviitiko zvakakosha kwazvo mukati mehupfumi hweSpanish uye mupfungwa iyi hachisi zano rakaipa kuiswa mukambani yakanyorwa mune ino yakakosha chikamu.
Amadeus: ine yakakwira kumusoro mikana
Kubva pane ino maonero, iyi yakanyorwa kambani inopa mukana wakanaka wekutenga sezvo ichipa mukana wekudzokorora padyo ne 40% mazinga. Kubva kumaeuro makumi masere nemasere pamugove wairi kutengesera panguva ino uye mushure mekugadziriswa kwazvino nekambani yehunyanzvi, iyo inobvumidza kuisa mari pazvakawanda zvinokwezva chaizvo. Kune rimwe divi, ine goho remugovano re81%. Ichokwadi kuti haisi imwe yenzira dzinokwezva dzinopihwa nemisika yenyika ye equity. Asi chero zvakadaro, chinhu chitsva chinokurudzira kutora chinzvimbo mune iri rakakosha musika kukosha kwemusika wemusika.
Amadeus ikozvino inopa chaiyo yepamusoro yekuongorora mikana zvichibva pane zvinotevera nharo. Kune rimwe divi, rake kuonekwa kwemari uye margins mune IT mhinduro. Uye kune rimwe divi, kuwedzera kwayo muchikamu chehotera kuburikidza nekubatanidzwa muchirongwa chinozivikanwa seKufamba Click. Uye hazvikanganwike kuti iyi kambani inochengetedza kuonekera kwakanyanya kwemhedzisiro yayo uye dzakasimba dzakasimba. Kusvika kune icho icho chiripo mune yekudyara portfolio yechakanaka chikamu chevamiriri vemari. Kuve mumwe wevamiriri vanopinda mumisika yemari mugore rakaomarara kwazvo kumisika yemari.
Mari yavo yakawedzera 5%
Amadeus IT Group SA yakawana purofiti yakagadziridzwa yemamiriyoni emamiriyoni mazana masere nematanhatu nematanhatu mumwedzi mipfumbamwe yekutanga ya886.6. Izvi zvinomiririra kukura kwe2018%, zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura. Kune rimwe divi, mari yaAmadeus yakawedzera 5.1% kusvika 4,6 mamirioni euros, nepo EBITDA yakawedzera 3.683,8% kusvika 8,6 mamirioni euros. Imwe dhata yaive neiyo investor rutsigiro nekuratidza kuti chirevo chavo cheakaunzi chinoenderana nezvitarisirwa izvo kukosha kwakange kwasvika pakutanga kwegore rapfuura.
Sezvakaita muhafu yekutanga yegore, mukota yechitatu, mari yedu yese neEBITDA zvakaramba zvichikanganiswa nekuchinja kwemutengo wekuchinjana (pakati peUS dhora neiyo euro pachayo), kunyangwe kusvika padiki pane makota maviri ekutanga egore. Mumakota matatu ekutanga egore, mari inowanikwa yakawedzera ne7.7%, kusanganisa mari mhedzisiro (yakatorwa zvakanyanya kubva mukuchinja kwemutengo wekutsinhana pakati peUS dhora neeuro maererano negore rapfuura).
Nani hupfumi margins
Kune rimwe divi, iyo mwedzi mipfumbamwe, iyo EBITDA, kusasanganisa IFRS uye mari mhedzisiro (inokonzerwa nekuchinja-chinja kwemari dzakasiyana siyana mukati menguva) yakakura padanho repamusoro-kamwe uye yakaburitsa kuwedzera kudiki kwemuganhu weEBITDA. Idzi data dzakatungamira iyo kambani pachayo kusimbisa kuti "tinoramba tiine tariro uye tine chivimbo chekuti tichaenderera mberi neiyi tsika yekukura kwakanaka mukati megore rose." Kukurudzira kutengwa kwemasheya mumisika yemari kuti igare munguva yatange tiri mugore idzva.
Saka hazvishamise, nekudaro, kuti zvakapihwa chiitiko ichi chakaunzwa nekambani, vazhinji vevamiriri vezvemari vafunga kukurudzira kutengwa kwemasheya avo nekwaniso yekuwongorora iyo inofamba munzvimbo anotangira pa6% kusvika 12%, zvichibva pamishumo yevatengesi vakasiyana vakaongorora mamiriro emari yekambani yakanyorwa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yehunhu hunopa zvirinani zvehunyanzvi chimiro panguva ino chaiyo.
Inowedzera mitsara mumutengo wayo
Zvinoenderana neAmadeus technical technical, ayo chaiwo mamiriro akanyorwa muchikamu chekubatanidza, kubvira yapfuura rebound uye neyakajeka kumusoro fungidziro. Zvirinani kusvika pfupi uye yepakati izwi. Hazvishamisi kuti huwandu hwezvibvumirano uye huwandu hweakakura huri kuwedzera mukati nepakati nepakareba. Mune icho chiratidzo chakanakisa chekuvhura nzvimbo kubva ikozvino.
Mune imwe tsinga, uye ichigara ichitaura nezvehunhu hwayo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti panguva ino, uye maringe nezviratidzo zvayo, kukosha uku kweIbex 35 kuri kutengesa pamusoro pesupoti yaro huru, iri munzvimbo yemakumi matanhatu nenhanhatu. Maeuro pachiito. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mutengo waro munyonga urikuvandudza kufamba kunodaidzwa kurasa. Ndokunge, kukunda kwekushora kwakapfuura uye izvo zvakazove zvitsigiso. Iine yakajeka yekuratidzira fungidziro iyo inogona kubatsira matekiniki ayo madiki nepakati varimi vatengesi vanounza.
Iyo yakanyorwa pamatanho e64 euros
Uyu ndiwo mutengo uripo panogadzirisirwa zvikamu zvaro panguva ino uye zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti ichave neinosimudza nguva yemwedzi mishoma inotevera kana mashoma mavhiki Nenjodzi shoma munzira chero bedzi iyo 62 euro chiyero nemasheya, chinova chikamu chakakomba chemutengo wekambani iyi muchikamu chekushanya. Kana iri nzira, hakuzove nekuwanda kwekutya kune chikamu chevashambadziri. Iko, hapana mubvunzo kuti kune zvakawanda zvekuwana pane kurasikirwa kana tsigiro dzichiremekedzwa nekurangwa kukuru muchirongwa chakaitwa.
Kune ese aya zvikonzero, hazvishamise kuti kukosha kwakakosha kweiyo Spanish equities ndeimwe yemashanu mashanu eIbex 35 masheya ayo aratidzira kugona kukuru kumusoro kubvira kutanga kwegore. Muchikamu chinogona kuve utiziro mukutarisana nezviitiko zvisina kugadzikana mumisika yequity. Iko kutenga kumanikidza kunogona kuve referensi rezvaunosarudza seyimbo yekutsinhana yemasheya kuti kuchengetedza kwako kubatsire nenzira inoshanda uye kubvisa zvakateerana zvengozi mumabasa ako. Naizvozvo, ndeimwe yesarudzo yekutarisa mukati megore rino razvino, uye pamusoro pemamwe matema ebhuruu pamusika weSpanish wemusika. Iko, hapana mubvunzo kuti kune zvakawanda zvekuwana pane kurasikirwa kana tsigiro dzichiremekedzwa nekurangwa kukuru muchirongwa chakaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Amadeus: yakabatana zvakanyanya nekushanya